काठमाडौंं । म ३२ वर्षीया गृहिणी हुँ । मेरी जेठी छोरी १५ वर्षकी भइन् । विगत दुई वर्षदेखि मैले तीनमहिने सुई प्रयोग गर्दै आएकी थिएँ ।
तर सुईले महिनावारी रोकिएपछि मैले गत जेठमा सुई लगाइनँ । सुई छोडेको चार महिना भए पनि मेरो महिनावारी भएको छैन । अहिले आएर वाकवाक लाग्ने तथा खाना नरुच्ने भएपछि घरमै पिसाब परीक्षण गर्दा गर्भ रहेको देखियो । के यसरी महिनावारी नै नभै गर्भ रहन सक्छ ? मेरी छोरी नै ठूली भैसकिन्, अब मैले के गर्ने ?
परिवार नियोजनका लागि प्रयोग गरिने तीनमहिने सुई ९संगिनी, डिपो० मा एक किसिमको हार्मोन प्रयोग गरिएको हुन्छ । नेपालमा प्रयोग गरिने अस्थायी साधनहरूमध्ये सबैभन्दा बढी दम्पतीले रुचाएको तीनमहिने सुईले महिलाहरूमा अण्डा उत्पादन हुन नदिनुका साथै शुक्रकीटलाई पाठेघरमा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने तथा पाठेघरको भित्री तहलाई गर्भका लागि आवश्यक तयारी गर्न नदिने भएकाले यो अत्यन्त प्रभावकारी साधनका रूपमा स्थापित छ ।
यद्यपि तीन महिने सुई प्रयोग गरेका महिलाहरूमा सुई छाडेको ३ देखि १० महिनासम्म महिनावारी नहुन हुन सक्छ । उक्त समयमा सामान्यतस् गर्भ रहदैन, तर कसै–कसैमा महिनावारी सुरु नभए पनि गर्भ रहन सक्छ ।
तपाईंको उमेर ३२ वर्ष मात्र भएकाले गर्भपतनपछि फेरि गर्भ रहन सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले फेरि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नुपर्छ । तपाईंहरूलाई सन्तान पुगिसकेको भए स्थायी बन्ध्याकरण वा लामो समयसम्मलाई हुने साधन कपर टी वा ज्याडेल ९इन्प्लान्ट० प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
विरामीको मृत्यु भएपछि तनावग्रस्त बन्यो विर्तामोडको कनकाई अस्पताल परिसर
झापा । उपचारका क्रममा एक युवतीको मृत्यु भएपछि झापाको विर्तामोडस्थित कनकाई अस्पताल परिसर तनावग्रस्...
ग्रीनसिटीमा अस्पतालमा भयो रविनाको मलद्वारको निःशुल्क शल्यक्रिया
काठमाडौं । जन्मदेखि नै मलद्वार नभएकी दाङकी ८ वर्षीया बालिकाको सफल शल्यक्रिया भएको छ । दाङ तुलसीपु...
धरानमा अझैं नियन्त्रणमा आउन सकेन डेंगु, डेंगु संकटग्रस्त वडा घोषणा
धरान । सुनसरीको धरानमा फैलिएको डेंगु रोगको संक्रमण एक महिना वित्दा पनि अझै नियन्त्रण हुन सकेको छै...
महिलामा किन बढी देखिन्छ ढाडको बाथ रोग ? जोगीन यी उपाय अपनाउनुस्
काठमाडौं । बाथ रोग भन्नाले शरीरको रोग निरोधक शक्तिले आफ्नै शरीरको अंगलाई असर गरेर हुने रोग भन्ने ...
के यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुस्, यात्रामा कहिले वान्ता हुँदैन
काठमाडौं । बस, ट्याक्सी तथा हवाइजहाज चढ्दा अधिकांश मानिसले वान्ता गर्छन् । कतिपयलाई भने सवारीसाधन...
काठमाडौँ । स्थानीय तहमा अझै २५ हजार कर्मचारीको रिक्त रहेकाले चाँडै पदपूर्ति गर्ने सङ्घीय मामिला ...
इसिडि शिक्षकको तलब वृद्धि, शिक्षाका लागि १ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन
ब्वाईफ्रेन्ड भेट्न गएकी महिला प्रहरीलाई तीनजना प्रहरीलेनै गरे पालै पालो बलात्कार ( हेनुृहोस् यो भिडियो)
लोकसेवा विज्ञापनमा १ लाख ५ हजारको दरखास्त, कुन समूहतर्फ कतिले दरखास्त दिए ?
८ अर्ब दिएर अस्थायी शिक्षकलाई यसरी घर पठाउँदै छ सरकार
जोडीले उत्तेजना बढाउने औषधी सेवन गरेर सेक्स गर्दा युवतीको मृत्यु
अस्थायी शिक्षकहरुका नाममा जरुरी सूचना जारी,तोकिएको सेवा सुविधा यसरी पाउने